Taariikhda burburkii Roomaanka ee xeebta Bolonia | Wararka Safarka
Mariela Carril | 11/01/2022 17:00 | Espana, Maxaa la arkaa
Tuulo ayaa jirta koonfurta Spain oo lagu magacaabo Bologna. Halkan, xeebteeda, oo ku taal xeebta Strait of Gibraltar, waxaa jira jajabyo Roomaan ah oo loo yaqaan magaca Claudia Baelo. Waxay jiraan qiyaastii 2 oo sano waxayna yihiin hanti aad u weyn.
Maanta, gudaha Actualidad Viajes, ee taariikhda burburkii Roomaanka ee xeebta Bolonia.
1 Bologna, Spain
2 Burburkii Roomaanka ee Xeebta Bolonia
3 Goobta qadiimiga ah ee Baelo Claudia
Markaad dhageysato Bologna waxaad si toos ah uga fekereysaa Talyaaniga laakiin maya, kiiskan waa a tuulada xeebta ee degmada Tarifa, gobolka Cádiz, koonfurta Spain. Waxay ku taal xeebta badda Atlantic, oo kaliya dhowr 23 kiiloomitir in ka badan ama ka yar oo waddo ka timid Tarifa, magaalo ay iyaduna ku tiirsan tahay caanka Costa de la Luz in, Strait of Gibraltar iyada oo loo marayo, eegaan Morocco.
Bologna bay ku taal iyo burburkii Roomaanka ee maanta inagu yeedhaya waxay u dhow yihiin xeebta. Waa la tixgeliyaa Burburkii ugu dhameystirnaa ee magaalo Roomaan ah ilaa maanta laga helay Spain. Iftiin!
Xeebta Bolonia waxay dhererkeedu dhan yahay 4 kiiloomitir waxayna leedahay balac celcelis ahaan 70 mitir. Dad aad u yar ayaa halkan ku nool, dadkeedu ma gaaraan 120 qof.
Booska meeshan ayaa ah mid mudnaan leh oo ku raaxaysanaya aragtiyo cajiib ah: ciidda cad ee xeebta Bolonia waxay ka socotaa Punta Camarinal ilaa Punta Paloma, waxaadna arki kartaa buuraha San Bartolome ee bari iyo buuraha Higuera iyo Plata ee galbeedka. Sidaa darteed, waxaa la abuuray deked gabaad ah oo mar ku habboonayd in lagu xidho doomaha shiraaca.
Burburkii Roomaanka ee Xeebta Bolonia
Laakiin ka waran burburkaas? Waxay noo sheegeen in mar uun ay halkan ku noolaayeen dad ka badan kuwa maanta, taasi waa hubaal. Runtu waxay tahay Baelo Claudia waxay ahayd magaalo qadiimi ah oo Roomaan ah oo ku taal Hispania. Waxay ahayd asal ahaan a tuulada kalluumeysiga iyo buundada ganacsiga oo waxay garanaysay sida aad u barwaaqaysan lahayd waagii Imbaraadoor Kalawdiyos, in kastoo dhulgariirkii joogtada ahaa dartood uu ku dhammaaday laga tagay qiyaastii qarnigii XNUMXaad.
Claudia Baelo Waxaa la aasaasay dhamaadki qarnigii XNUMXaad ee BC. si kor loogu qaado ganacsiga Waqooyiga Afrika iyada oo loo marayo kalluumeysiga tuna, ganacsiga milixda iyo wax soo saarka garxajis (Suugo kalluun khamiir leh oo si weyn loogu isticmaali jiray karinta qadiimiga ah), inkasta oo sidoo kale la rumeysan yahay inay sidoo kale lahayd qaar ka mid ah hawlaha maamulka.
Waxay ahayd waqtigii Claudio markii ay heshay magaca degmada iyo hantideeda ayaa ka muuqata tirada iyo tayada dhismaheeda. Cilmi-baarayaasha qadiimiga ah waxay rumeysan yihiin in meeshii ugu sarreysay la gaarey intii u dhexeysay qarnigii XNUMXaad iyo XNUMXaad ee BC, laakiin taasi Badhtamihii qarnigii labaad waxa dhacay dhulgariir weyn oo dumay qayb wanaagsan oo ka mid ah dhismayaasha, taas oo calaamad u ah bilawga dhamaadka..
Masiibadan dabiiciga ah ayaa daba socotay weerarrada burcadbadeedda Qarnigii xigay, labada Jarmal iyo barbariyiinba, markaa inta u dhaxaysa kor iyo hoosba dhammaadkeedu wuxuu yimid qarnigii lixaad.
Goobta qadiimiga ah ee Baelo Claudia
Daahfurkii burburka ayaa ahaa Jorge Bonsor. Qodista ayaa iftiimisay burburka Roomaanka ee ugu dhameystiran ee dhammaan Jasiiradda Iberian iyo maanta macbudka Isis, masraxa, basilica, suuqa waa la kala saari karaa ...
Qaabka magaalada ee burburkaas waa cajiib iyo Raac khariidadda Roomaanka ee caadiga ah oo leh laba waddo, ka yamaaruggii maximus taas oo u gudubta xagal toosan ka dibna jihada waqooyi-koonfur iyo ka decumanus maximus oo bari ilaa galbeed ka baxa kuna dhamaata meesha laga soo galo magaalada.
Halka ay labadan dariiq isku xidhaan waxay ahayd forum ama fagaaraha weyn, oo lagu dhejiyay dhagax asal ah oo ka yimid Tarifa, weli muuqda oo si fiican loo ilaaliyo. Madasha waxaa la dhisay xilligii Augustus, laakiin magaalada oo dhan waxay si weyn u kortay xukunka Kalawdiyos, xilligii Jamhuuriyadda.
Hareeraha waxaa yiil dhismayaashii maamulka dadweynaha. Waxa kale oo jirtay barxad furan oo saddex dhinac ka mid ah ku yaalleen oo gasha macbadka boqorka, curia iyo qolka shirarka.
Dhabarka waxaa ku yaal dhismo kale oo muhiim ah, oo ah basilica, Waxa ay lahayd hawlo dhawr ah, inkasta oo ay ugu muhiimsanayd kursiga fadhiga maxkamadda cadaaladda. Dhinaca bidix waxaa laga dhisay dhismayaal badan oo dhagax ah oo ay ka mid yihiin dukaamo badan, maqaaxi, tusaale ahaan.
Goobta qadiimiga ah ayaa maanta ilaalinaysa wakiilka ugu badan ee magaalada Roomaanka, kuwaas oo ah derbiyo dhagax ah oo lagu xoojiyay ilaa afartan munaaradood, las albaabada waaweyn ee magaalada, dhismayaasha maamulka sida kaydka degmada ama golaha guurtida, golaha, maxkamadaha kuwaas oo uu hor kacayay taallo uu leeyahay Imbaraadoor Trajan oo dhererkiisu ka badnaa saddex mitir. afar macbad, saddex ka mid ah ayaa loo qoondeeyey Minerva, Juno iyo Jupiter, kan kalena Isis; weyn masraxa qaadi kara laba kun oo qof iyo haraadiga a suuqa oo leh qayb gaar ah oo loogu talagalay iibinta hilibka iyo cuntada oo leh 14 dukaan iyo barxad gudaha ah, qaar biyo kulul ah iyo goobo kale oo ganacsi.
Ma jirto magaalo Roomaan ah oo aan lahayn biyo mareen, markaa halkan Baelo Claudia waxaa jira afar. Waxaa jiray afar biya-mareen oo magaalada ka heli jiray biyo waxayna muhiim u ahaayeen shaqada warshadaha deegaanka ee garxajis, tusaale ahaan, laakiin sidoo kale nolol maalmeedka magaalada. Waxa kale oo ka mid ahaa nidaamka bullaacadaha iyo bullaacadaha. Tani waxay runtii ahayd magaalo Roomaan ah oo leh dhammaan xarfaha waana sababta ay u tahay hanti qadiimiga ah oo run ah.
Waa mid ka mid ah luulka qadiimiga ah ee Andalusia, sidoo kale tirinta Italic ee xaafadaha Seville iyo Acinpo ee duleedka Ronda. Burburkii lama ilaalin oo kaliya ee waa la soo celiyay, ogol yahay gobolka weyn ee ilaalinta iyaga ka mid ah.
Maanta waxay ka shaqeysaa goobta a martida Xarunta oo ah marin dhab ah oo magaalada ku taal. Waa dhismo shub ah oo ay dadka deegaanku ay aad uga soo horjeesteen xilligaas, laakiin si fiican ayuu u lumay dhulkii dunta guud ahaan. Waxaa jira atrium dhexe, rinji cad oo leh balakoon quraarad ah oo eegaya xeebta quruxda badan.
Booqashada xarunta ayaa hordhac wanaagsan u ah booqashada burburka tan iyo markii waxaa jira model miisaanka magaalada waqtigiisii ​​ugu fiicnaa iyo a hagaha maqalka aad u fiican.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira waxyaabo qaali ah oo la soo bandhigay sida taallo marmar ah oo la rumeysan yahay inay ka mid tahay ilaahyada qaar waxaana laga helay Puerta de Carteia, oo ah mid ka mid ah jidadka muhiimka ah ee magaalada, tuubo rasaas ah oo laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, tiir dib loo soo celiyay oo ka yimid Basilica iyo hadhaagii taallo marmar ah oo laga helay musqulaha badda taasoo ka dhigan sawirka qaawan ee cayaaryahanka lab ah waxaana loo yaqaanaa Doryforus de Baelo Claudia.
Burburka waxaa laga soo galaa xarunta marka waxaa jirta waddo la soo jeediyay, inkastoo dabcan aad mari karto dariiqa adiga kugu habboon. Waxa ku xiga waxa ka soo hadha albaabka laga galo bari waxa ku yaala meel yar oo biyo mareen ah oo cabirkeedu markii hore ahaa in ka badan shan kiilo mitir oo biyo u dhaamin jirtay musqulaha dhinaca galbeed u socday. Waxaa la aaminsan yahay in musqulahaasi ay isugu jireen kuwo isboorti iyo kuwo firaaqo ah isla markaana sida caadada ahayd ay lahaayeen il kulul oo aad u weyn oo raaxo leh iyo mid ka yar oo gaar ah.
Goobaha kale ee bulsheed waxaa ka mid ahaa fagaaraha madasha, kaas oo 12 tiir ay weli ku hareeraysan yihiin, basilica iyo sidaan horay u sheegnay. tiyaatarka oo ah mid ka mid ah meelaha sida buuxda loo ilaaliyo loona soo celiyay. Waxay ku taal jiirada dabiiciga ah oo dhammaan aagga fadhiga waa la soo celiyay. Xitaa waa la isticmaalaa maalmahan sida goob casri ah wax soo saarka xagaaga ee masraxa qadiimiga ee Isbaanishka.
Ka dib, ee koonfur bari ee goobta, waxaa jira xarun badda Aad bay muhiim u tahay in la booqdo si loo dhammeeyo fahamka magaalada iyo taariikhdeeda. Waxay ku saabsan tahay degmada warshadaha, oo ka yimid goobta qubeyska milixda, halkaas oo tuna lagu nadiifiyo laguna milix si loo ilaaliyo. Tani waxay ahayd warshaddii ka dhigtay Baelo Claudia hodmi oo waxaad xitaa arki kartaa shabaqyada dib loo soo celiyay ee Roomaanku ay wakhtigaas u isticmaali jireen kalluunka cabbirka.
Mid ka mid ah xaqiiqooyinka madadaalada ugu dambeeya? 2021 Baelo Claudia waxay ahayd goobta duubista taxanaha Netflix, Crown. Waxa ay si kooban u noqotay Masar markii taxanahani muujinayey booqashadii Lady Di ee Masar 1992kii.
Baelo Claudia macluumaad wax ku ool ah:
Saacadaha ay furantahay: Laga bilaabo Janaayo 1 ilaa Maarso 31 iyo laga bilaabo Sebtembar 16 ilaa Diseembar 31, waxay furan tahay Talaadada ilaa Sabtida 9 subaxnimo ilaa 6 galabnimo iyo maalmaha Axadaha iyo fasaxyada 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo. Laga bilaabo Abriil 1 ilaa Juun 30, waxay furan tahay Talaadada ilaa Sabtida laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 9 galabnimo iyo maalmaha Axadaha iyo fasaxyada 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo. Laga bilaabo Luulyo 1 ilaa Sebtembar 15 waxay furan tahay Talaadada ilaa Sabtida 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo iyo 6 ilaa 9 galabnimo iyo Axadaha iyo fasaxyada 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo. Maalmaha Isniinta way xidhmaysaa.
Fasaxyada guud ee qiimahoodu waa Julaay 16 iyo Sebtembar 8 maalmahaasna goobtu waxay furan tahay 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo.
Xagaaga waxaad ku raaxaysan kartaa bandhigyada amphitheater-ka.
Waxaa jira safarro la hagayo oo leh habayn qiimo leh.
Ogolaanshuhu waa bilaash loogu talagalay muwaadiniinta EU ee wata baasaboorka ama aqoonsiga. Haddii kale waxay ku kacaysaa 1,50 euro.
Sida loo yimaado: laga bilaabo Tarifa ee wadada N-340 ilaa kilomitir 70.2. U leexo CA-8202 oo raac waddo maxalli ah oo gaarta tuulada Ensenada Bolonia. Si toos ah u tag halkii aad bidix u leexin lahayd dhanka xeebta, 500 mitirna waxaad arki doontaa xarunta martida iyo baarkin bilaash ah oo dhanka bidix ah.
Goobta: Ensenada de Bolonia s / n. Tarifa, Cádiz. Isbayn
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Taariikhda burburkii Roomaanka ee xeebta Bolonia
Waxa lagu arko Jaén